Maamulka Jubbaland oo kulan ka yeeshay Shirka Magalada Garoowe * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Jubbaland oo kulan ka yeeshay Shirka Magalada Garoowe
By Abdirisak M Tuuryare	 On May 9, 2019
Magalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose waxaa Maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay Golaha wasiirada Maamulkaas,iyada oo kulanka ay uga hadleen arrimo dhowr ah oop ka jira deegaanada Jubbaland.
Kulanka waxaa shir guddoominaayey Kusimaha Madaxweynaha Jubbaland ahna Madaxweyne ku-xigeenka labaad Cabdiqadir Xaaji Maxamuud,,waxaana diirada lagu saarayarrimo ay ka mid yihiin Amniga,Abaarahasiyaasada iyo sidoo gargaar loo gaarsiin lahaa dadka abaartu saameysay eek u nool deegaanada Jubbaland.
Sidoo kale intii uu kulanka socday ayaa waxaa shirka shirka warbixinno looga dhegaystay wasaaradaha Waxbarahsada, Arrrimaha gudaha, Amniga iyo Howlaha guud iyo Guryeynta,waxaana Wasaaradaha badi ay soo bandhigeen waxqabadkoodii todobaadkaan.
Wasiirada Jubbaland ayaa shirkooda sidoo kale waxa ay ku ku bogaadiyeen shirka wadatashiga Qaran ee ka socda magaalada Garoowe, waxayna rajo wanaagsan ka muujiyeen miro dhalka shirkaasi,iyaga oo geba-gabadii dalbaday in si deg deg ah loogu gurmado dadka ay abaartu saameysay.
Madaxweyne Farmaajo oo sii socodsiinta howlaha Golaha…
Madaxweyne Farmaajo oo aqbalay go’aanka G/Shacabka ee…
Beelaha Banaadiriga oo ka cabanaya Maxkamada Sare iyo…
Hogaanada Puntland & Galmudug oo kulan xasaasi ah ku…
Duqeeyn lagu dilay Saraakiil muhiim u ah xagjiriinta al…
Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyey dadaalka Xukuumadda iyo…
J/Dhexe:- Duqeeyn Horjoogayaal looga dilay Xagjiriinta…
Madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay in wadajir loogu istaago…
Dallada Ururada Bulshada Rayidka oo ka soo horjeestay Shaqo…
Qormo: Jahaweerarka siyaasadeed ee hogaanka Dowladda…
Madaxweyne Farmaajo oo ugu hambalyeeyay Ciidanka Xoogga…
J/Dhexe:-Duqeen lagu dilay horjoogayaal ka tirsan…
Guddoomiye Muuse Macalin oo ka hadlay arimaha Cadaalada…
DUQEEYN:- Weerar qasaara ba’an lagu gaarsiiyay…
JUBADA DHEXE :- Duqeeyn Saraakiil Muhiim ah Looga dilay…
Dhuusamareeb:Ahlusun oo Dagaal culus ku qaaday Dowlada…
Guddoomiye Muuse oo ku baaqay in la sameeyo goobo lagu…
Safarka la sheegay in Madaxweyne Farmaajo ku tagayo Hargeysa…